စက်ရုံအသစ်များအက္ခရာအတိုကောက်အက္ခရာများအတုဆေးစက္ကူ hologram စတစ်ကာတံဆိပ်, တရုတ်စက်ရုံနောက်ဆုံးပေါ်ထုံးစံတံဆိပ်ထိပ်တန်းအရည်အသွေး anti- အတုစက္ကူ hologram စတစ်ကာတံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ - Hainan Tianjian အတုဆန့်ကျင်သိပ္ပံ & amp; Technology Co. , Ltd ။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ 3D ကုဒ်လုံခြုံရေးတံဆိပ်
QR code လုံခြုံရေးတံဆိပ်
ထင်ရှားသော hologram လုံခြုံရေးတံဆိပ်ကိုပျက်ပြယ်သွားသည်
Rivet နှင့်ဂီတ Box ကို
အပူ Shrink Cap
Hologram 3D ကုဒ်လုံခြုံရေးတံဆိပ်
အထွေထွေ 3D ကုဒ်လုံခြုံရေးတံဆိပ်
3D code AB လုံခြုံရေးတံဆိပ်
Hot stamping သတ္တုပါး
မှတ်ပုံတင်ထားသော Hologram Hot Stamping Foil
Hologram Strip ဖြင့် QR လုံခြုံရေးတံဆိပ်ကပ်ပါ
အမျိုးမျိုးသော QR Code ကို Holographic လုံခြုံရေးတံဆိပ်
ရောင်စုံ QR Code ကိုလုံခြုံရေးတံဆိပ်
Variable QR ကုဒ်နံပါတ်နှင့်ထူးခြားသောနံပါတ်
အတည်ပြု QR Code ကိုလုံခြုံရေးတံဆိပ်
လုံခြုံရေးတံဆိပ်ကို QR Code ဖြင့်ခြစ်ပါ
ပွင့်လင်း hologram တံဆိပ်
ပန်းချီကားများနှင့်အတူ Holographic လုံခြုံရေး Thread
Tape Tetters Letters
3D holographic ပေးစာနှင့်အတူ Tape Tape
မူလစာမျက်နှာ>ကုန်ပစ္စည်း>QR code လုံခြုံရေးတံဆိပ်>Hologram Strip ဖြင့် QR လုံခြုံရေးတံဆိပ်ကပ်ပါ
စက်ရုံသစ်တွင်ထုံးစံအတိုင်းအသစ်စက်စက်တံဆိပ်ခေါင်းများမှအရည်အသွေးမြင့်သောစက္ကူ hologram စတစ်ကာတံဆိပ်ကပ်ခြင်း
This qr code security label is combined physical carving letters and hot stamping hologram strip, which have obtained the national standard and international patent. Randomly rotating text are core anti-counterfeiting features, which are randomly carved by physical patented production process.
We have independent research institute and professional technical team to provide you with anti-counterfeiting, shipping management, promotion and other services.
1. Beautiful hot stamping and hologram pattern enhance your brand image ,which can increase product value.
2. A unique QR code is available to be printed on the label for product authentication, anti-counterfeiting and promotion.
၃။ တံဆိပ်တစ်ခုစီ၏လုံခြုံရေးအက္ခရာများမှာမတူညီပါ။ တူညီတဲ့တံဆိပ် ၂ ခုလုပ်လို့မရဘူး။
4. Scanning QR code to verify authenticity by checking character consistency
5. The sticker is available to customize with company name, logo and barcodes, so that adds additional security for your existing packaging.
1. ဖောက်သည်များ၏ဆော့ဖ်ဝဲလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထားသော software စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း၊
3. Cloud server (၃) ခု (Amazon Cloud, Alibaba Cloud & Tencent Cloud)၊ local server တစ်ခု (ဒေသသုံး power supply စနစ် ၄ ခုကိုဒေသအလိုက်သုံးသည်) နှင့်အမျိုးသားကြယ်လေးပွင့် IDC ကွန်ပျူတာအခန်း server တစ်ခု (အမျိုးသားကွန်ယက်လမ်းကြောင်းလမ်းပေါ်တွင်) ။
Variable QR ကုဒ် holographic လုံခြုံရေးတံဆိပ်
အမှတ် ၁၉၊ ရှင်ဟိုင်းလမ်း၊ အမျိုးသားအဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုဇုန်၊ ဟိုင်ကို၊ ဟိုင်နန်၊ တရုတ်
© 1999 - 2020 Hainan Tianjian အတုဆေးသုတ်ဆေးသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက် မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။